गच्छदारलाई कुन कोटाबाट लैजाने ? - Jhilko
गच्छदारलाई कुन कोटाबाट लैजाने ?
काठमाडौं । नेपाल तरुण दल, नेवि संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल महिला संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरुमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही असोज १० गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
नेवि संघ गत माघदेखि केन्द्रीय समिति विहीन छ । कार्यकाल एक वर्ष थप्दा समेत महाधिवेशन गराउन नसकेपछि साविकको कार्यसमिति विघटन भएको थियो । चार जना पदाधिकारीको मात्रै केन्द्रीय समिति रहेको नेपाल तरुणदलको म्याद पनि आगामी मंसीर १ गतेदेखि सकिँदै छ । तर, गत भदौ २८ गते तरुणदलको केन्द्रीय समिति विभाजित भएको छ ।
अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीलाई निस्कासनको घोषणा गरेका छन् भने महासचिव शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई निस्कासनको घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष बस्नेत देउवा पक्षका हुन् भने महासचिव शाही इतर पक्षका हुन । एक अर्कालाई निस्कासन गरेको घोषणा गरेसँगै दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि अघि बढाएका छन् । महासचिव शाहीको समूह यतिबेला भ्रष्टाचार तथा महङ्गीको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा छ ।
आन्दोलनमा लागेका कारण तरुण युवा तथा नेवि संघमा आवद्ध विद्यार्थीहरुको साथ शाही समूहले पाउन थालेको छ । पार्टी इतर पक्षका नेताहरुले शाहीको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागिताका लागि उर्दी जारी गरेपछि सभापति देउवा अप्ठेरोमा परेका हुन् । वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेलको कर छली काण्ड, वालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरण लगायत जुन जुन प्रकरण र काण्डमा सभापति देउवाको संलग्नता देखिएको छ तिनै काण्डको छानविन हुनु पर्ने मागलाई लिएर तरुण दलका महासचिव शाहीको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन सुरु भएका कारण अध्यक्ष बस्नेत अप्ठेरोमा परेका छन् ।
यिनै मुद्धामा आन्दोलन गर्नुपर्ने अडान महासचिव शाहीले राखेपछि अध्यक्ष बस्नेतले सभापति देउवाको निर्देशनमा शाहीलाई निस्कासन गरेका थिए । तर, यतिबेला शाहीको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले ठूलो आकार लिँदै गएपछि सभापति देउवा छटपटीमा परेका छन् । देउवा पक्षकै बालकृष्ण खाण, पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले भित्री रुपमा महासचिव शाहीको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार तरुणदलको समस्या समाधानका लागि वर्तमान कार्य समिति विघटन गरी ऋषिकेश जंग शाहको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सभापति देउवालाई दिएका छन् । सभापति देउवा पनि यो सुझावमा सकारात्मक छन् ।
यता तरुणदलको अध्यक्ष एउटा पक्षले पाए नेवि संघको अध्यक्ष अर्को पक्षले पाउनुपर्ने दावी इतर समूहले गरेको छ । ३२ वर्षे उमेर हद सम्वन्धी विवादका कारण नेवि संघको केन्द्रीय समिति गठन हुन नसकेको हो ।
४५ वर्षीय ऋषिकेशजंग शाहलाई नेवि संघको अध्यक्ष बनाउने तयारी देउवाले गरेपछि इतर पक्षले विधानमा उल्लेखित ३२ वर्षे उमेर हदको कुरा उठाएर किचलो गरेको थियो । यो किचलोपछि देउवाले आफ्नो प्रयास थाती राखेका हुन । ऋषिकेशजंग शाहलाई तरुण दलको अध्यक्षका रुपमा सेटल गराएपछि नेवि संघको गठन गर्न मार्गप्रशस्त हुने ठहरमा देउवा पक्ष पुगेको छ । तर, नेवि संघमा ३२ वर्ष मुनिकालाई ल्याइन्छ कि त्यसभन्दा माथिकालाई ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यसैगरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति गठनको मामिला पनि नेपाली कांग्रेसमा ज्यादै पेचिलो देखिएको छ । विधानमा तोकिएको भन्दा बढी संख्या भएको भन्दै इतर पक्षले किचलो मच्चाएपछि एक वर्षअघि सभापति देउवाले दुवै समिति विघटन गरेका थिए । अब फेरि गठन गर्नको लागि समस्या देखिएको छ । विगतमा देउवा पक्षबाट संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा समावेश गरिएका कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र केवि गुरुङको विषयलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको हो । यी तीन जनालाई आफ्नो कोटाबाट लैजान रामचन्द्र पौडेल पक्ष तयार छैनन् । आफ्नो साथ छाडेकालाई आफ्नै कोटाबाट लैजान देउवा पनि तयार छैनन् ।
देउवाको पक्षबाट ६० र पौडेलको पक्षबाट ४० जनाको सहमति भएको हो तर यी तीन जनाको नाम कुन पक्षबाट लैजाने ? भन्ने विवाद छ । त्यसैगरी मधेसी दलबाट आएका विजयकुमार गच्छदारलाई कुन कोटाबाट लैजाने ? भन्ने विवाद पनि बाँकी नै छ । असोज १० गतेदेखि सुरु हुने बैठकले यसका अतिरिक्त केन्द्रीय विभाग गठनका लागि खाका कोर्ने, गच्छदारको पार्टीबाट आएकाहरुलाई समायोजनको अनुमोदन गर्ने लगायतका निर्णय गर्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
ट्रिलियन डलर मूल्यांकन भएको कम्पनी अमेजनको आयकर शून्य
कर प्रावधानको कमजोरीको फाइदा उठाउने कम्पनीहरूमा अमेजन र नेटफ्लिक्स
दक्षिण कोरियामा यस भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १३ पुगेको समाचारमा जनाइएको...